सहनशील नारीको वेदना र खुशी
प्रशान्त वली साहित्यकार एवं पत्रकार सविन प्रियासनको पाँचौं उपन्यास सहनशीला बजारमा आएको छ। यसभन्दा अगाडि उनका पल्लवी, पुनरागमन, भूमरी र रोदनपछिको नामका उपन्यास प्रकाशित भइसकेका छन्। उनको पछिल्लो उपन्यास सहनहशीलामा
मोहन दुवाल पेसाले डाक्टर तर साहित्यलाई पनि सँगसँगै अङ्गाल्दै आएका डा. बालकृष्ण थापा भर्खरै हवाई दुर्घटनामा परी स्मृतिका पानामा सीमित हुन पुगे। विद्यार्थी जीवनदेखि नै मेरो घरमा आइरहने मैले चिनेका
कवितामा गाउँले परिवेश
रूपा भण्डारी पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामको तत्कालीन श्रीअन्तु–२ हालको सूर्योदय नगरपालिकाका कवि एकु घिमिरे ‘एउटा बाटो गाँउसम्म’ नामको कविता संग्रह लिएर उदाएका छन्। यस संग्रहमा कविले गाउँले परिवेश, नेपालको राजनीति,
पोखरा। बहुआयामिक प्रतिभाका धनी देशभक्तसिंह कुँवरको एकघन्टामै लेखिएको हाइकुसंग्रह ‘अमृतप्रेम’ लोकार्पण भएको छ। साढे तीन महिनामै लगातार ३ कृति सार्वजनिक गरेका कुँवर यसपालि भने फरक परिचयसहित साहित्यिक फाँटमा देखा परेका
बेलायतमा रहेर पनि नेपाली भाषा–साहित्य क्षेत्रमा निरन्तर मन दिई केही न केही गरिरहने, केही न केही लेखिरहने र स्रष्टाहरूसँग संवाद चलाइरहन मन गर्ने साहित्यकार एवं नियात्राकार हुनुहुन्छ कृष्ण बजगाईं। उहाँका
रामसुन्दर देउजा साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये एक विधा हो महाकाव्य। त्यसो त रचनाशिल्पको दृष्टिले सबैभन्दा जटिल विधा पनि हो यो। संस्कृत साहित्यमा महाकाव्यको स्वरूपका बारेमा आचार्य भामहले सर्वप्रथम चर्चा गरेका हुन्।
स्मृतिमा अक्षरपूजारी कृष्णप्रसाद दुवाल
मोहन दुवाल त बुधबार कृष्ण दाइ अर्थात् साहित्यकार कृष्णप्रसाद दुवालले ७८ वर्षको उमेरमा सधैँका लागि हामीलाई छोडेर गए। यिनै साहित्यकार कृष्ण दाइका अक्षर गाथाहरू स्मृतिमा राखेर नियालिरहेछु। बनेपाको माटोमा जन्मेर,
रामसुन्दर देउजा नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी लेखिने विधा कविता हो। टिनएज (१३ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म) को उमेरमा मानिसले प्रेम गर्दा कविता एकपटक लेखेकै हुन्छ भन्ने भनाइ छ तर कति मानिस
कवि सूर्यप्रसाद लाकोजूको मुक्तक वाचन गर्दै थिए। भन्दै थिए– भीमसेन थापाले धेरैलाई देशको नियतिका बारेमा स्मरण गराउँछ। उनले सिर्जनालयको पहिलो शृङ्खलाअन्तर्गत आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘भीमसेन थापाहरू’ शीर्षकको मुक्तक
भरत पौडेल तौलियाले जवानीलाई टमक्क कसेर केशबाट पानी चुहाउँदै सरु बाथरुमबाट बाहिर निस्किइन्। मैले सोचेँ– मलाई देखेपछि उनी हत्तपत्त भित्र पसेर ढोका बन्द गर्नेछिन्। म अवाक भएँ, जब मेरै अगाडि
जीवन के हो ? जीवन के हो ?
सुख र दुःखको फूलबारी हो जीवन फूलैफूलको संगम हो जीवन काँडाबीचको फूल हो जीवन न फूल हो जीवन न काँडा जीवन केवल सुगा बस्ने पिँजडा हो जीवन सम्पन्नशाली मान्छेको लागि
दाङ। आधुनिकतासँगै सन्तानबाट तिरस्कृत हुने वृद्धवृद्धाहरूको पीडा लिएर दाङकी ममता बस्नेत सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी छिन्। १३ वर्षिया बस्नेतले सन्तानको वियोगमा तड्पिएका हजारौं बाबुआमाको पीडा बोल्ने गीत गाएर छोटो समयमै
वनकुसुम महाकाव्य र देवकोटा
केशव अधिकारी वि.सं. १९६६ मा जन्मेर अल्पायुमै २०१६ सालमा निधन हुने नेपाली साहित्यका महान् प्रतिभा तथा नेपाली साहित्यका महाकविको सम्मान पाएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सयौँ फुटकर कविता, खण्डकाव्य तथा महाकाव्यसमेत लेखेका